Sarimihetsika no betsaka | NewsMada
Sarimihetsika no betsaka
Nidina ifotony, nijery ny fahasahiranam-bahoaka, teny ambany tanàna, hono, izany ramatoa minisitry ny Mponina, ny faran’ny herinandro teo. Avy eo, nizara vary maimaimpoana, hoe ho an’ny fianakaviana sahirana. Ity resaka vidim-bary ity mantsy izao no tena mampikaikaika ny rehetra, tao anatin’ny fotoana vitsivitsy naharitraritra izay. Fa tetsy ankilan’izay, nisy fivoriana niarahan’ny minisiteran’ny Varotra tamin’ireo mpandraharaha, omaly, ny amin’ny hoe hanafarana vary 20 taonina mahery. “Tsy hay hazavaina”, hono, mantsy ny mahatonga izao fiakaran’ny vidim-bary eny an-tsena izao, ka izay no anton’izany.
Mipetraka ny fanontaniana. Tsy hay hazavaina amin’ny ahoana moa izany ? Efa hita izao fa misy dia misy ny mpanararaotra, mpanafim-bary, na eo anivon’ny mpamongady na any ifotony, eo amin’ny mpaninjara. Na hanafatra vary hatrany amin’ny 100 taonina isan’andro aza ny fanjakana, raha tsy ireo mpanararaotra ny fahasahiranam-bahoaka ireo mihitsy no avela hanao izay danin’ny kibony, tsy hisy raha manjary izany eto.
Mazava izao fa fanalalahana gaboraraka no manjaka. Tsy fanarahan-dalàna no dikan’izany. Ary rehefa misy ny tsy fanarahan-dalàna, tokony handray ny andraikitra tandrify azy ny mpitondra fanjakana. Raha tena ilaina aza, mila samborina sy saziana izay hita fa fanetribem-pirenena. Tsy ilàna fiaraha-miasa amin’ny vahoaka, sady tsy andraikiny rahateo izany.
Raha tsy mahita vahaolana mazava, azo tsapain-tanana, maika dia maika amin’izany ny fanjakana izy ireo no tompon’antoka voalohany. Ary moa, tsy efa mandeha amin’izany izao ny ahiahin’ny vahoaka ? Iniana atao izay hisian’ny fikornotanan-tsainan’ny olona ka rehefa hitady hipoaka ny sarom-bilany, miditra moramora amin’izay ny resaka politika. Toa izay nataon-dramatoa minisitry ny Mponina teny ambany tanàna, ny faran’ny herinandro teo. Nizara vary maimampoana ho an’ny sahirana. Ny andro rahateo, ankatoky ny fety, ny fifidianana mananontanona. Ohatran’ny hoe, ny eny Andavamamba ihany no misy vahoaka sahirana. Mbola fampielezan-kevitra alohan’ny fotoana, mampalaza ny fitondrana HVM izany. Sarimihetsika no betsaka.